HomeWararka CiyaarahaJurgen Klopp oo Qirtay in Thiago Alcantara uu Seegi Doono finalka Champions League
May 23, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa qirtay in uu filayo in Thiago Alcantara uu seegi doono kulanka sabtida ee finalka champions League ee ay la ciyaari doonaan Real Madrid sabab la xiriirta dhaawacii ka soo gaaray kulankii Wolverhampton Wanderers.
31 jirkaan ayaa ka soo muuqday seerigii ugu horeeyay ee Anfield maalintii ugu dambaysay ee xilli ciyaareedka Premier League laakiin waxa uu hoos ugu dhacay tunnelka wax yar ka hor waqtigii nasashada ka dib markii uu si khaldan u baas u dhigay Trent Alexander-Arnold.
Thiago ayaan kusoo bixin qeybta labaad ee ciyaarta waxaana lagu bedelay James Milner iyadoo Liverpool ay 3-1 ku badisay, lakiin kuma filna inay hogaanka u qabtaan Manchester City.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa ku dhibtooday inuu si joogto ah taam ugu ahaado Reds, lakiin waxa uu bilaabay inuu sii adkeeyo booskiisa kooxda ka dib markii uu ka fogaaday dhaawacyo muddo dheer ah.
Klopp ayaa wax laga waydiiyay xaalada Thiago ka dib markii uu si rasmi ah u qayliyay, waxaana tababaraha Liverpool uu qirtay inuusan haynin war wanaagsan oo uu la wadaago.
“Waxaan u maleynayaa inuu ka maqnaan doono finalka, laakiin ma aqaano, wuu dhutinayaa, marka ma ahan calaamadda ugu fiican, qaybta hoose ee jirka, waan ogahay waxa ay tahay, laakiin ma rabo inaan sheego” Klopp. ayuu u sheegay Sky Sports News .
Warbixin ka duwan oo ay soo saartay The Athletic ayaa lagu sheegay in Thiago uu dhaawac ka soo gaaray Achilles, laakiin ciyaaryahankii hore ee Bayern Munich iyo Barcelona ma uusan soo gaarin dhaawac weyn.
Si kastaba ha ahaatee, Thiago ayaa weli wajahaya dagaal culus si uu isugu diyaariyo dagaalka Los Blancos, kooxda ayaana arki doonta sida uu uga jawaabo daawaynta labada maalmood ee soo socota.
Haddii ciyaaryahanka khadka dhexe uu seego finalka, waxa uu soo gabagabeyn doonaa xilli ciyaareedka 2021-22 isagoo labo gool dhaliyay iyo shan caawin 38 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 17 kullan oo Premier League ah.
Thiago ayaa xirtay maaliyada Liverpool guud ahaan 68 jeer tan iyo markii uu kaga soo biiray Bayern 2020, laakiin waxa uu seegay 44 kulan oo kale dhaawac ama xanuun horeba.
Iyadoo Thiago hadda loo arko inuu shaki weyn ku jiro inuu ciyaari karo finalka, Klopp ayaa rajeynaya inuu ku soo dhaweeyo Fabinho oo ku soo laabanaya qolka matoorka iyadoo ciyaaryahanka reer Brazil uu kor u qaadayo inuu ka soo kabsado dhaawac muruqa ah.
28-sano jirkaan ayaa seegay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee Reds tan iyo markii uu sii adkeystay arinta kulankii Aston Villa 10kii May, laakiin waxaa rajo wanaagsan laga muujinayaa inuu diyaar u yahay kulanka sabtida ee bandhiga Yurub.